Muqdisho oo Aan Weli Nasan • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Muqdisho oo Aan Weli Nasan
Fiidnimadii Xalay ayaa kooxda al-Shabaab weerar ku soo qaadeen fariisimo ay iska lahaayeen ciidamada Dawladda iyo kuwa AMISOM, fariisinkaas ayaa ku yaaley degmada Boondheere. Dagaalka ayaa ahaa mid kooban oo aan la mid ahayn dagaaladii ba’naa ee magaaladu dersika la noqotey bishii August.
Khasaaraha ka dhashey dagaalkaas ayaa lagu sheegay dhaawac dad gaaraya 15 qof iyo dhimashada 2 qof.
Dhanka kale waxaa weli xiran goobihii dagaalada culus ay ka dhaceen sida degmooyinka Hodan iyo Hawlwadaag, halkaas oo ay ku yaaleen jidadka muhimka u ahaa isu socodka, waxaana dadku hadda isticmaalaan oo keliya wadada Ex-Kontrool Afgooye, halkaas oo ay wada degan yihiin Ciidanka AMISOM, sidoo kale al-Shabaab ayaa degan wasaaraddii Gaashaandhiga oo u muuqata fariisimaha AMISOM, Wadadaas ayaa ah mid aad u khatar badan, waxaana dhawaan miino kula kacdey laba gaari oo dad rakaab ah ay saaran yihiin.
Si kastaba ha ahaatee waxaa todobaadkan la sugayaa maalintii faraxa lahayd ee ciidda Fidriga, waxaana dadka aad ugu adkaatey in ay helaan dukaameysi iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin Ciidda.
Dagaaladan danbe ee ka socda Magaalada Muqdisho ayaa bilowdey 12 August kooxda al-shabaab u ku dhawaaqdey dagaalka ayaa ugu magacdaray “Nihaayatul Muctadiin” Dhamaadka kuwa xadgudbey, mana jirto wax hormar ah oo laga gaarey dagaalkaas aan ka ahayn in shacab aad u badan ay ku dhinteen halka ay ku dhaawacmeen boqolaal kale.